မျက်ကန်းများ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မျက်ကန်းများ (၂)
Posted by nigimi77 on Apr 18, 2012 in Buddhism, Cultures, Editor's Choice | 55 comments
ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပါရက်နဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ မလုံခြုံပါ ။
ကံကောင်း ထောက်မစွာ ကျွန်တော် မသေခဲ့သဖြင့် သည် စာ ကို ယခု ရေးနိုင်သည် ။
ရန်ကုန်မှ လာသည့် ကျွန်တော်၏ ၀န်ထမ်းများလည်း ထိုအချိန်က ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ ။
ကျွန်တော်အား ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်နေသည်ကို အံကြိတ်ပြီး ရပ်ကြည့်နေခဲ့ရသည် ။
ဒီဒေသရဲ့ဓလေ့ ဆိုတာကြီးကို သိရှိထားသော အဖွဲ့ ဝင် တစ်ယောက်က မည်သူကိုမှ ၀င် မကူညီရန် တားခဲ့သည် ။
ထိုသူကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်သည် ။ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းရိုက်လို့သေရင် ကျွန်တော် တယောက်ထဲ သေမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ကို ၀င်ကူညီလျင် ထိုသူအားလုံး သေမည် ဖြစ်သည် ။ ဗမာများအား ရခိုင်များ၏ မုန်းတီးမှု ခေါင်းစဉ်အား အသုံးချပြီး
ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လူမျိုးရေး အဓိကရုန်း ကို သေချာပေါက် ဖန်တီးလာကြတော့မည် ။ နှစ်ဆန်း ၁ ရက် နေ့ ၏ လူသတ်ပွဲမှ အစပြုပြီး
ဗမာ မုန်းတီးရေး ၊ တိုင်းရင်းသား ရပိုင်ခွင့်များကို အသံကျယ်ကျယ် အော်ဟစ်လာကြတော့မည် ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကံကောင်းခဲ့ပါသည် ။
အဆိုပါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိစ္စမှ လက်မတင် လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ ။
ကျွန်တော့် အဖေသည် ရခိုင် လူမျိုးဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော့် အမေသည် တရုပ် လူမျိုးဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က မှတ်ပုံတင်တွင် ဗမာ ဟု ဖော်ပြခဲ့သည် ။ ကျွန်တော် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ပြန်ရောက်လာပြီး
မှတ်ပုံတင် လဲလှယ်သော အခါ ရခိုင် ဟု မိမိ ဆန္ဒ အလျောက် ပြောင်းလဲ ခဲ့သည် ။
ကျွန်တော်၏ မိဘ ၂ ပါးသည် ဘယ်သော အခါကမှ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု အတွေးအခေါ်အား မသွပ်သွင်းခဲ့ပါ ။
ဘယ်သော အခါမှ ကျွန်တော့်မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အတွေးအခေါ် မရှိခဲ့ပါ ။
ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသား လူတစ်ယောက် ဖြစ်သည် ဟုသာ ယနေ့ အချိန်အထိ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တွင် နေစဉ် ဘယ်သော အခါမှ ဗမာ လူမျိုးတို့ သော်၎င်း ၊ အခြား လူမျိုးများမှသော် ၄င်း ၊ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားခံရခြင်း
မရှိခဲ့ပါ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ရောက်မှ ရခိုင်သွေးပါသည့် ကျွန်တော်သည် ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်စော်ကားမှုကို ခံခဲ့ရပြီ ။
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါ ။ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်ထားသည့် ရိုက်နှက်မှု၏ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ရပြီ ။
သူတို့ သည် ကုသိုလ်ယူရန် ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘုရားသို့လာရောက်ကြပြီး အကုသိုလ် အလုပ်ကို ဘုရားရှေ့ မှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော် အရိုက်ခံချင်လို့ဖြတ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ ။ မသိခဲ့ပါ ။ မသိလို့လုပ်မိခြင်းဟာ အပြစ် မရှိပါ ။ ဒီဒေသမှာ ဒီလို ကိစ္စမျိုး ရှိတယ် ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင်
တားဆီးရမည် ။ တရားဝင် ကြေညာရမည် ။ ဒီ ဒေသမှာ ဧည့်သည်တွေ များသည်ထက်များလာသည် ။ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း များလာပြီ ။
မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဒေသ အသီးသီးမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော လူများလည်း ရှိသည် ။ ဧည့်သည် ဘုရားဖူးများလည်း လာကြသည် ။
ဒါဆိုလျင် မသိလို့ဖြတ်မိရင် မိန်းမ ဆိုရင် ကော ရိုက်မှလား ဆိုတော့ သေချာပေါက်ကို ရိုက်မည် ဟုဆိုသည် ။
ဒါဆိုလျင် အခြားသော ဒေသမှ ရဟန်း တစ်ပါးမှ ဒီ အရပ်ဒေသသို့လာရောက် ဘုရားဖူးရင်း ကျွန်တော်ကဲ့သို့လူတန်းကို ဖြတ်မိလျင်သော်……
သေချာပေါက်ကို ရိုက်ပါမည်…..။ သင်းပိုင် နှင့် လွတ်အောင်သာ ပြေးရပါတော့မည်…..။
နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ တဲ့……..
ဘုရား ရေသပ္ပါယ်ဖို့လာကြတယ်တဲ့…..
ကျွန်တော် ဘာမှ မသိလိုတော့ပါ ….ဘာမှ မသိချင်တော့ပါ……။
အဆိုပါပြင်းထန်ဆိုးဝါးလွန်းသော ကိစ္စများသည် လူကြီးများ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လူငယ်တွေက သွေးကြွစွာ ရိုက်နှက်ကြသည် ။
ကျွန်တော် နောက်ထပ်လည်း ကိုသစ်မင်းတို့ပြောဆိုလာခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို လည်း မဖတ်ချင်တော့ပါ ။
ဒီနိုင်ငံသည် ပြောလေကဲလေ…မန်းလေပြဲလေ…ဖြစ်လာနေသည် ။
ဦးဖော ရေးသည့် တိုင်းရင်းသား အရေး ဆိုသည်များ ၊ နစ်နာမှု ဆိုသည်များအားလည်း ဒီထက် ပိုပြီး မမြင်ချင်တော့ပါ ။
ရခိုင် နှင့် တရုပ်စပ်သည့် ကပြား ကျွန်တော် သည် သူတို့ တတွေ ဗမာပြည်ဟု သုံးနှုံးသည့် နယ်မြေတွင် နွေးထွေး အန္တရာယ်
ကင်းစွာ နေထိုင်ခဲ့သည် ။
ရွာထဲတွင် ရွာ အရက်ဆိုင်များရှိသည် ။ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပရောဂျက်နှင့် လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသည့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ သူများ၏
ပင်ပန်းမှုအား အပန်းဖြေစရာ နေရာဖြစ်သည်။
ည ၉ နာရီလောက် ဆိုလျင် ဒေသခံ များသည် ဒုတ် ၊ ဒါး ၊ သံပိုက် အစရှိသည်တို့ အား ကိုင်ဆောင်ကာ ရွာအလယ် အရက်ဆိုင်များ ရှိရာသို့ 
ချီတက်လာပြီး …..” ဗမာကောင် ဆို အကုန်ရိုက်”….ဟု ဆိုကြသည် ။
ဒီဒေသတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ပရောဂျက်ကြောင့် ဒီ ဒေသခံတွေ အတွက် ကောင်းတာတွေရှိနိုင်သလို ဆိုးတာတွေလည်း ရှိနိုင်သည် ။
ကျွန်တော် ပြောဆိုနိုင်သော အပိုင်းမဟုတ်တာကြောင့် ဒီနေရာမှာ မပြောလိုပါ ။ သေချာတာကတော့ ဒီလိုလာပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့
လူတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ အလွန် စီးပွားဖြစ်ကြသည် ။ ဒီဒေသမှာ ဖာတန်း မရှိပါ ။ အားလုံးသော ၀န်ထမ်းများသည် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်ကြသည် ။
အလုပ်ပြီးချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတွက် အပန်းဖြေစရာသည် အလွန် သစ္စာရှိသော အရက်သာလျင်ဖြစ်သည်။
အားလုံးသော သူတွေသည် မိဘ ဇနီး သားသမီး ချစ်ခင်ရသူများ အားလုံးနှင့် ခွဲခွာပြီး ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ။
ဘယ် လူမျိုးကိုမှ စော်ကားလိုစိတ် မရှိပါ ။ ဘယ်ရိုးရာ ဓလေ့ကိုမှ မထေမဲ့မြင် မပြုကြပါ ။ ကိုယ့် အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြပြီး အရက် နှင့် စိတ်ဖြေကြရသည် ။
ဒီ နိုင်ငံသည် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည် ။
ဒီနိုင်ငံ၏ ဒေသတခုတွင် ခံစားနေရသော စိုးရွံ့ မှု အတိုင်း အတာသည် တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာသည် ။
ညဖက် Camp ထဲမှ အပြင်ထွက်သော် စိုးရိမ်စိတ် စတင် ၀င်ရောက်စေသည် ။
ကျွန်တော့် နားထဲတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြားယောင်လာသော စကားမှာ…… ” ဗမာဆို အကုန် ရိုက်” …..ဆိုသည်ပင် ။
ဗမာ ဟုတ်မဟုတ် မည်သူက လည်ပင်းတွင် စာချိတ်ပြီး သွားလာခြင်း ရှိပါမည်လော ။
ကျွန်တော်တို့ သည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင် လုပ်ကိုင်ရင်းပင် စိုးရွံ့ စိတ်ပေါင်းများစွာ၏ ဖိစီးမှုနှင့် အတူ
လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု၏ သားကောင် အဖြစ်ခံရတော့မည်လော ။
ကျွန်တော် သေရမည်ကို မကြောက်ပါ ။ သို့ သော် လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး၏ ခုတုံး သားကောင်တော့ အဖြစ်မခံနိုင်ပါ ။
ကျွန်တော် အပါအ၀င် အခြားသော လူများသည်လည်း စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေကြသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ကို မည်သူက ကာကွယ် ပေးနိုင်မည်လဲ ။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အသက် အန္တရာယ် အတွက် မိမိဘာသာ ကာကွယ်ရမည်လား ။
တခုပဲ တွေးမိတာ ရှိသည် ။ သူတို့ တွေ ပြောတဲ့ ဗမာပြည် ဆိုတဲ့ နေရာဟာ ကျွန်တော့် အတွက် အလွန်ကို နွေးထွေးစေသည် ။
အလွန်ကို အန္တရာယ် ကင်းသည် ။ လူ့ အခွင့်အရေးတခုနှင့် အတူ ကျိုးကြောင်း ဖြေရှင်းခွင့် ရှိသော လူအဖွဲ့ အစည်း စုဝေး နေထိုင်ရာ
အရပ် ဖြစ်သည် ။ အာဖဂန်နစ်စတန် ကဲ့သို့ သော နိုင်ငံမျိုးတွင် နေထိုင်ကြသော အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုသည်
ကျွန်တော့်အား ရိုက်ခတ်စေသည် ။ ကျွန်တော်လည်း ပိုင်ဆိုင်သော ကျွန်တော်တို့ ၏ နိုင်ငံတွင် အဆိုပါ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ စိုးရွံ့ သလို
ဖြစ်လာနေသည် ။ ကျွန်တော်သည် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်သည်။ ရခိုင်၊ တရုပ်စပ်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော့် နိုင်ငံတွင် ကျွန်တော် ကြောက်ရွံ့ နေလာမိသည် ။
အာဖဂန်နစ်စတန် နှင့်လည်း မနှိုင်းလိုပါ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံသားလည်း မဖြစ်ချင်ပါ ။ မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ်စစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း လူ လူချင်း လူမျိုးရေး
ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုများ ကင်းဝေးစေရန် ရည်ရွယ်ပြီးရေးသည် ။
အဆိုပါ ကိစ္စများ တတ်နိုင်သလောက် လျော့ပါးခဲ့မည် ဆိုလျင် ကျွန်တော် ခွေးလို နွားလို အရိုက်ခံခဲ့ရသည်ကို ကျေနပ်နေပါမည် ။
အားလုံးသော ဂေဇာတ် မိတ်ဆွေများ ခင်များ ။
ကျွန်တော် ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျမ်းမာပါတယ် ။
အနည်းငယ်တော့ မူးနောက်နောက် ဖြစ်နေပါသေးတယ် ။
မိမိ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လည်း လက်လှမ်းမှီ သလောက် ဘာသာရေးကို
ခုတုံး မလုပ်ဖို့လူမျိုးရေးကို ခုတုံး မလုပ်ဖို့လက်ဆင့် ကမ်းပေးကြပါ ။
ကို nigimi77 ရေ
ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကျန်းမာတယ်ကြားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ ခေါင်းကိုထိထားတယ်ဆို မပေါ့စေချင်ပါဘူး။ medical checkup သေချာလုပ်ပါအုံး။
ယတြာလေး ဘာလေး ကြိုလုပ်ဖို့လည်းပြောအုံးမယ်.. အသက်အန္တာရာယ် စိုးရိမ်စရာဖြစ်တာ တပတ်အတွင်းလောက်မှာ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီဆိုတော့လေ..(ငလျင်ကိစ္စဖြစ်တုံးက ဆူနာမီကြောက်ခဲ့ရသေးတယ်လေ)
လူမျိုးရေးအရှုပ်အရှင်းတွေထိ မဖြစ်ခဲ့တာ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့တွက်ရမှာပေါ့ဗျာ..
သြော်.. awareness awareness..
အဲလောက် အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးနေကြတာ ရေလည်အံ့သြမိတယ်
” ဗမာဆို အကုန် ရိုက်” ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားရတာ စိတ်ထဲမကောင်းလှပါဘူး ရှင်။
အဲ့ဒီလို အတွေးတွေ ရှိနေတာ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အန္တရယ်များလှပါတယ်။ စိုးရိမ်ရေမှတ်ပါ။
သူကြီးပြောသလို Anti Discrimination ( လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှု နှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေ)ပြဌာန်းပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေး ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ လိုနေပါပြီ။
ဘာတဲ့ ဗမာ ဆိုအကုန် ရိုက်တဲ့ ဟုတ်လား။
ဦးဖာကြီး ခင်ဗျားကို သတိရလိုက်တာဗျာ။ ခင်ဗျား ပြောနေကျ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဗမာတွေဆီလာပြီး ပညာလာသင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ မေးကြည့်ပါဗျာ။ ဗမာတွေက တိုင်း၇င်းသားတွေနဲ့ လူငယ်ချင်း ရန်ဖြစ်ကြရင် ရခိုင်ဆို အကုန်သတ်၊ ရှမ်းဆို အကုန်သတ်၊ တိုင်းရင်းသားဆို အကုန်သတ်လို့ ဗမာပါးစပ် (ခင်ဗျား သုံးတဲ့ အဲဒီအရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေ ပါးစပ်)က ထွက်ဖူးလားဆိုတာ။ ဘယ်သူတွေမှ လျှောက်မမေးနဲ့ အဲဒီ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားကိုသာ သွားမေးဗျာ။ တကယ် တကယ် ရင်နာတယ်။ ဦးဖာရေ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါးစပ်က လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ချင်တဲ့ စကားလုံးတွေ ထွက်လာတာက ခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့လား။ ဟူး..ရင်နာတယ်။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မြင့်မြတ်လွန်ရာကျမယ်။ တကယ်ပါဗျာ ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ကိုယ့်မြန်မာ ဘုရင်တွေကိုပဲ စိတ်နာတယ်။ ဘယ့်နှယ် အဲဒီ အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေ နဲ့မှ ပြည်ထောင်စု ညီနောင်ဖွဲ့ ရတယ်လို။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ရှက်မိပါတယ်………….အောင်မြင့်မြတ်
အသုံးအနှုံး ဆင်ခြင်ပါကွယ် ။
ကိုယ် အရိုက်အနှက် ခံလိုက်ရပြီး ပေးချင်တဲ့ Message က ဒါမဟုတ်ပါဘူး ။
ကို aung myint myat ရေ
ဘာအတွက်ကြောင့် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးကို သုံးရပါသလဲကွယ် ။
ကိုရင်က အသားကျနေလို့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးကို သုံးနေတာဖြစ်ပေမယ့် ။
အဲလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးကို သုံးခြင်းဟာ
ဒီဆိုက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို နိမ့်ကျစေပါတယ်ကွယ် ။
အဲလိုစကားလုံးကို သုံးတာကို ဒီဆိုက်က ခွင့်မပြုပါဘူးကွယ် ။
နောက်ဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပါစေကွယ် ။ နော် ။
နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ကိုရင့် Comment ကို ဖျက်ခိုင်းလိုက်ရပါလိမ့်မယ် ။
ပညာတတ် လူအများ ဝိုင်းကြည့်နေပါတယ်ကွယ် ။
အရှက်ရှိမယ်ဆိုရင် ရှက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်ကွယ် ။
ဘိုးတော်မင်းဆိုတဲ့ဘုရင် မတရားမှုတွေလာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ သမိုင်းကိုလေ့လာပါဦးလား။ ဘယ်သူကဘယ်သူ့မြေကိုကျူးကျော်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလည်းလို့။
ဘိုးတော်မင်းလက်ထက်မှာ ခင်ဗျားရော ကျုပ်ရော ဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်မသိဘူး
ထင်ပါတယ် ( အထင်ပါ )
အဲ့သည် ကျုပ်တို့ဘယ်ဘဝမှာမှန်းမသိတုန်းက သူတို့ဖာသာ သူတို့
အဲ့သည် ဒေသရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးကို တစ်ဆိတ်လောက်
zaw than kyaw says:
အောင်မြင့်မြတ် ရေ မင်းကတော နာမည်သာ မြင့်မြတ်တာ စိတ်ဓတ်ကတော မမြင့်ပါဘူး၊တိုင်း၇င်သားလူမျိုးတွေနဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေ နဲ့ ဘာပြသာနာတွေ ရှိ လဲ၊ အဲဒီ ဒေသတွေ မှာဘာပြသနာတွေရှိလဲ ဆိုဒါ မင်းဘာမှမသိဘဲ နဲ့လူ မျိုး တမျိုး လုံးကို စော်ကားတယ် ၊ မင်းတော် တော် မိုက် ရိုင်း ပါလား၊တကယ်ဆို မင်းပြောသလို ငါ တို့က ပိုပြီးတော့ တောင်မင်း တို့ နဲ့အတူ တူ မနေ ချင်ဘူး၊ ငါ တို့က အရင် သမိုင်းအဆက် ဆက် ကို ယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း နဲ. နေ လာ ခဲ့ ကြ တာ မင်းသဘောပေါက်။
မျက်ကန်းများ( ၁ ) မှာ ပါတဲ့လိပ်စာကို သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသမြို့ရွာအမည်အပြည့်စုံကို
ဓာတ်ပုံနှင့်တစ်ပါးတည်းဒွန်းတွဲဖေါ်ပြသင့်တယ် ( လူတန်းကြီးကိုပါ )
အထူးဆိုလိုခြင်တာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမှာ ဒီလိုအကောင်းမြင်သဘောလေးတွေ
ထားပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြေရှင်းမှု့တွေလုပ်ဘို့ ခေါင်းထဲထားနိုင်တဲ့ သဘောလေးကိုတော့
ထိုအရပ်ထိုဇာတ်နှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်တော်များကို သိရှိမှတ်သားဘူးသူများမှ
ရခိုင် ပြည်နယ် ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း ၊ ကျောက်ဖြူမြို့ နယ် ၊ ဂုန်းချွိန် ကျေးရွာ ၊ ကန့် ကော်တော ဘုရား အနီးမှာပါ ။
ဓါတ်ပုံက ကိုယ်တိုင် မရိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ရိုက်ချိန်မရလောက်အောင် အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပဲ ဆိုပါစို့ ။
Camp ထဲက ရိုက်ထားမိတဲ့ လူ ရှိမရှိ မေးကြည့်ပြီးရင် ဓါတ်ပုံ တင်ပေးပါမယ် ။
ဒါပေါ့ ..ဘာသာရေး.ကိုတော့ ခုတုံး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အရေးကောင်းတဲ့ .နိဂိမိရေ.. ပို့စ်လေးကို ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
” ဗမာကောင် ဆို အကုန်ရိုက်” ……
….ဆိုတာမျိုးကို နေရာတော်တော်များများမှာ တဆင့်စကားနဲ့ ကြားဘူးပါတယ်။
ကိုယ့်နားနဲ့တိုက်ရိုက်အားဖြင့်တော့ နေရာတခုမှာ ကရင်လူငယ်တချို့ ညာသံပေးတာကြားဘူးပါတယ်။ တစ်ခါထဲပါ။
အဲဒါ ရခိုင်လူမျိုးက/ ကချင်လူမျိုးက / ကရင်လူမျိုးက / မွန်လူမျိုးက/ ရှမ်းလူမျိုးက ပြောတဲ့စကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး…။
လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တဲ့ ၀ါဒ/စိတ်ထားရှိသူတွေက မြှောက်ပေး လှုံ့ဆော် လို့ဖြစ်ရတာပါ။
အဲဒီနေရာမှာတော့ ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ (အများအားဖြင့်လူငယ်တွေ) ရော အရိုက်ခံရမယ့်လူတွေပါ ဓါးစာခံတွေပါ။
ဘာကြောင့် ဆိုတာတွေကို နောက်ပြန်လှည့် တရားခံရှာမနေချင်တော့ပါဘူး…။
အရေးကြီးတာက ရှေ့မှာ၊ နောင်မှာ ၊ အနာဂတ်မှာ ကျုပ်တို့မျိုးဆက်တွေကို ဒီခါးသက်မှု့တွေ မပေးခဲ့ကြဘို့ပါပဲ။
အေးပေါ့ဗျာ.. သွေးခွဲတဲ့သူတွေကလဲ ခွဲချင်ခွဲပစေပေါ့…
ကျုပ်ကတော့ သွေးစည်းအောင် ကြိုးစားမယ့်ဘက်က..
ကျုပ်လိုလူမျိုး အလုံအလောက်ရှိတယ်လို့ ကျုပ်ယုံတယ်။
ဒီပိုစ့်တင်သူကို နမူနာကြည့်ဗျာ.. (သူ့ကိုဖါးဘို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိ)
သူ့အရိုက်ခံရတဲ့ဒါဏ်ရာကိုရင်းပြီး ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒါဏ်ရာကို ကုဘို့ ကြိုးစားတဲ့ပိုစ့်ကိုတင်တယ်…
( နိဂိမိရေ .. ထိခိုက်ဒဏ်ရာမများဘူးကြားလို့ဝမ်းသာပါတယ် )….
” ဗမာကောင် ဆို အကုန်ရိုက်” ဆိုတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေပြောတဲ့စကားကို ကန့်ကွက်သလို
“မြွေနဲ့ရခိုင် အတူတွေ့ယင် ရခိုင်ကိုအရင်သတ် “ဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပြောတတ်တဲ့စကားကိုလဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုး နောင်မဖြစ်ရလေအောင် စာနယ်ဇင်းတွေ အင်တာနက်ဆိုက်တွေ
ကနေ အရေးတယူ ဖေါ်ပြပေးသင့်ပါတယ် ….
အို ဒါမျိုးတွေကျတော့မဆွေးနွေးတတ်တော့ဘူး ……. အပြင်မှာသာ ကိုယ့်ကိုဒါမျိုးလာလုပ်ကြည့် မီးပွင့်သွား မယ် ….. စာကို Gazetteမှာတင်မှာမဟုတ်ဘူး နေပြည်တော်ထိကိုတင်ပလိုက်မယ် ………..
ကျွန်တော့်ကို ဒီလို ၀ိုင်းရိုက်တဲ့ ကိစ္စမှာ အားလုံးသော ရခိုင်လူမျိုးများဟာ
တူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး မတွေးခဲ့ပါဘူး ။
မတူညီတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ပြောခဲ့ကြသလို မတူညီတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ် ။
သေချာတာတခုကို သိလိုက်မိတာက တချို့ တချို့ သော သူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ချို့ တဲ့မှုဟာ
လူမျိုးစု တစ်ခုလုံး အပေါ်ကို အခြားလူမျိုးစုတွေက လွဲမှား တဲ့ အမြင်မျိုး မြင်လာနိုင်တယ် ဆိုတာပါ ။
ရင်ထဲက အမှန်တရားကို ထုတ်ပြောပါရစေ ။
ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြသူတွေကို ဒေါသ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အတွက် မြင့်မားတဲ့ လူ့ ကျင့်ဝတ် နဲ့အတူ ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလည်းခြင်းရဲ့ 
အဓိက နည်းလမ်း ဆိုတာကို ပဲ သြဇာသီး ဦးခေါင်းရဲ့အောက်က ဖူးရောင်နေတဲ့ မျက်နှာတခုနဲ့ 
ကျွန်တော်က ပိုသထက်ပိုပြီး ခံယူချက် ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ် ။
`လူမျိုးစု တစ်ခုလုံး အပေါ်ကို အခြားလူမျိုးစုတွေက လွဲမှား တဲ့ အမြင်မျိုး မြင်လာနိုင်တယ် ဆိုတာပါ ။´ မှန်ပါတယ် ကိုနီဂီမိရေ ……. လူတွေကရခိုင်ဆိုမုန်းကြတယ် (အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ် နော်) စကားပုံတွေတောင်ရှိခဲ့တာမှတ်လား ……… တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကွဲတွေဖြစ်တာလဲ မိမိသန္ဒေတည် ပေါက်ဖွားလာတဲ့နေရာဒေသကြောင့်သာ ကွဲပြားသွားကြတာပါ …….. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာ လူတွေပါပဲ အသား အရောင်လူမျိုးတွေဘယ်လောက်ကွဲပါစေ လူဆိုတာလူပါပဲ ဆိုတဲ့အသိကလေးထည့်လိုက်ရင် အားလုံးအေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ် …….
ဘာပဲပြောပြော ခင်ဗျားအခုလိုဖြစ်တာ စိတ်မကောင်းသလို ဒီပိုစ့်ကြောင့်လဲ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ဗဟုသုတ ရပါတယ် ကျေးဇူးပါ….ဦးခေါင်းဆိုတော့ နဲနဲဂရုတော့စိုက်ပေးပါ..
တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါလားနော်…ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ ကံ ကံ၏အကျိုးတရားတွေကို မယုံကြည်ကြပဲနဲ့များ
ဘာအတွက်ကြောင့်ဘုရားပွဲလုပ်ပြီး ဘာအယူတွေနဲ့ ဘာဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာရွာသားတွေ ပါလိမ့် ထူးဆန်းပါဘိ..
ဒီလိုအဓိပါယ်မဲ့ပြီး ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အယူမှားတွေကို ရပ်ရွာဓလေ့အဖြစ် အခုချိန်အထိ ကျင့်သုံးနေသေးတဲ့ ကျေးရွာတွေ
မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လောက်များရှိနေသေးလည်းဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ..(အထူးသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့
ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ရွာတွေမှာ အခုထိကျင့်သုံးနေတဲ့.. ကျနော်တို့မသိသေးတဲ့ ..ဆိုးရွားတဲ့အယူမှားရွာဓလေ့တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်)
ဂလိုဘယ်ခေတ်ကြီးကို တော်တော်မျက်ခြေပြတ် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လူသားတွေ အဖြစ်မြင်မိတယ်..
ဒေသခံခေတ်ပညာတတ်တွေအနေနဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ပါဘူး..မိမိလူမျိုးနဲ့မိမိဒေသကိုတကယ်ချစ်ရင်..နည်းလမ်းရှာပြီးပညာပေး ပြုပြင် တော်လှန်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဥာဏ်ပညာမဲ့သူတို့သည် ဆင်ခြင်တုံ တရားလည်းကင်းမဲ့ကြသည်ဖြစ်၍ မိုက်မဲမှုကိုပြုတတ်ကြကုန်၏..)
ထပ်ရှိဖို့လည်း မီးထိုးနေတာမျိုးတွေ.. ကြားနေရတယ်..
အပြန်အလှန်နားလည်ခွင့်လွတ်ကြအောင် …တောင်းပန်ကြေအေး လုပ်ကြရပါလိမ့်မယ်..
ခရီးရှည်ကြီးကို.. ပထမဆုံးခြေတလှမ်းနဲ့.. စကြတာပေါ့..
Lao Tzu ( 600 BC-531 BC)
ထိတ်လန့်ရပါတယ် ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး ကို နိဂိမိ ရေ ။
” ဒေသခံ များသည် ဒုတ် ၊ ဒါး ၊ သံပိုက် အစရှိသည်တို့ အား ကိုင်ဆောင်ကာ
ချီတက်လာပြီး …..” ဗမာကောင် ဆို အကုန်ရိုက်”….ဟု ဆိုကြသည် ”
တိုင်းရင်းသား ရခိုင် လူမျိုး တချို့ တွေရဲ့
( တော်တော်လေးများတဲ့ တချို့ လို့တော့ အဘ ထင်တာပဲ )
ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေ အတွေးတွေ ကို
လျှပ်စီးလက်သလို ရိပ်ကနဲ မြင်လိုက်ရသလို ပါပဲ ။
( ရိပ်ကနဲ မြင်ရတာဆိုပေမယ့် ၊ လျှပ်စီးလိုပဲ အားပြင်းလိမ့်မယ်နော် )
တချို့သော ( ယခုမှဝင်လာတဲ့ ၊ အဘရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို မသိသေးတဲ့ )
အဘ ရဲ့ Post နှစ်ခု ဟာ လူမျိုးရေး ကွဲပြားအောင် ရေးနေတာမဟုတ်ပဲ ။
ကွဲပြားနေပြီးသား ( ကွဲပြားနေပြီးသား ) လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ ကို
( လုပ်သွားတဲ့သူက မေ့နိုင်ပေမယ့် ၊ ခံရတဲ့သူက လွယ်လွယ်နှင့် မမေ့နိုင်တဲ့ )
ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်တယ် ဆိုတာ လမ်းစ ချပေးခဲ့တာပါ ။
( လိုရင်းကတော့ သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး တောင်းပန် လိုက်ပါ )
အခု ဒီအဖြစ်အပျက်ကလည်း ကွဲပြားနေပြီးသား ဆိုတဲ့ အမြင်ကို
ထုံးစံအတိုင်း အဘ တွေးတာမြင်တာတွေက
နဲနဲ ပွင့်လင်းနေ ၊ နဲနဲရှေ့ရောက်နေတဲ့ အတွက် ၊
တချို့ စာဖတ်သူတွေက လိုက်မမှီတာတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ ။
အဲဒီ အဘရဲ့ Post နှစ်ခုလုံးကို တွဲပြီး စိတ်အေးအေးထားပြီး ။
နောက်တစ်ခေါက်လောက် ထပ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး ရွာသူားတို့ရဲ့ ။
နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိမှာလေ ။ ဟီဟိ ။
ဒါမျိုး ကြုံတာ …စိတ်မကောင်းဘူးဗျို့ …
Wish you to speedy recovery !!!!!!
ဒီလိုမှန်းသိ လူအုပ်ထဲ ငါရှိနေလိုက်ပါဒယ်…။ ရကြောင်ခိုင် :cool:
တားမလို့လား ၊ ဒါမှမဟုတ် ၊
ဝိုင်းရိုက်တဲ့ထဲ ဝင်ပါမလို့လား ၊
ဘုရား ရေသပ္ပါယ်ဖို့လာကြတယ်တဲ့…..ကုသိုလ်ရေးတဲ့…….
ကျွန်တော်စိတ်ထဲ ရိုက်ခံရတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ လူတန်းကြီးကိုပဲ စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာစွာ
သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် လုပ်ကိုင်စားရတာ လဲ မလွယ်ပါကလား ။ လီနီမိ ရေ…
လိုရင်းတွေကွဲလာပြီဆိုတော့ကာ ကျုပ်ကဘဲ ဆရာဂျီးယောင်ယောင်ဘာယောင်ယောင်လုပ်ပြီး
ဦးစွာပထမ သဗ္ဗူရိသူရဲကောင်း အိုသံတွဲသားအပေါင်းတို့
ထကြကုန်လော အရက်ဝိုင်းမှ ကြက်ဝိုင်းမှ ဖဲဝိုင်းမှ ကုလားထိုင်များမှ
( နောင်ကြုံရင် ချဲယားကို ကုလားထိုင်ပါဆိုပြီး လုပ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရန်ပြန်ဖြစ်ကြ ဟုတ်ပါဘူး
ယောင်လို့ ပိုစ့်အဟောင်းတွေပြန်ရှာပြီးပြန်ရှုပ်ဂျဘာ ) ( ဇဂါးချပ် )
ဆိုတော့ကာ ကျုပ်အမြင်မူရင်းစို့စ်က သူတို့ဓလေ့ရိုးရာမှာ လူတစ်ယောက်က သာမန်ပြုမိတာကို
ဝိုင်းရိုက်ကြတဲ့ကိစ္စပါ ဒါကိုတွဲပြီးအခြေပြုပြထားတာက ဗမာဆိုရင် ရိုက်ပလိုက်ပေါ့
ပြဿနာလို့ပြောရမလား မူရင်းအကြောင်းက ပုံမပေါ်ဘဲ လူမျိုးရေးအကြောင်းကပုံပေါ်လာတာလေးသတိချပ်ကြပါ။
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ်က ဒီအကြောင်းကို လိုကေးရှင်း ( တည်နေရာ ) ရယ် ပရုရယ် ( သက်သေ ) ရယ်
ဒါကို ပြနိုင်မှ စတို၇ီက အော်ဖစ်ရှယ် ( တရားဝင် ) ဖြစ်လာမှာလို့ဆိုလိုပါပြီး
သက်ဆိုင်ရာ သံတွဲသားများအနေနှင့် ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာ
ကိုရင် မှားနေပြီ ။
သံတွဲ မဟုတ်ဘူး ။ ကျောက်ဖြူမှာ ။ ဆြာမေးလို့သေချာတိကျစွာ
လိပ်စာ ပေးထားရဲ့ သားနဲ့။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ဦးတည် မထားပါဘူး ။
လူမျိုးရေး အကြောင်းက ပုံပေါ်တယ်လို့မထင်မိပါဘူး ။ ကွန်မန့် ပေးတဲ့ လူတွေ
ထဲမှာက အလွန်ကို နည်းတဲ့ သူလောက်သာ လူမျိုးရေးဘက်ကို မြားဦးလှည့်လာတာပါ ။
ကျန်တဲ့ သူတွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။
သေချာတဲ့ အဓိက သက်သေကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပြီး
လိုကေးရှင်း ကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒုတိယ သက်သေက ကျောက်ဖြူ ရဲစခန်းပါ ။
တတိယ သက်သေက ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပြီး အဲဒီပုံ ဘယ်သူရိုက်ထားလိုက်သလဲ ဆိုတာကို
အလုပ် တစ်ဖက်နဲ့ မို့ ထိထိရောက်ရောက် မရှာဖွေနိုင်သေးပါဘူး ။
ဒါ ကိစ္စကို ဆြာက ဖတ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်း တပုဒ်လို ထင်နေသလား မသိပါ ။
ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ ရှင်လောင်းလှည့်တဲ့လူတန်းကြီးကိုဖြတ်ရင်တော့ အဆဲခံရပါတယ်
နတ်စင်ကိုဖျက်စီးရင် သဂျီးမဖမ်းပါဘူး နတ်ဂဒေါ်က ဆဲပါတယ်
ဆိုတော့ကာ ( အထူးဆိုလိုခြင်တာက ဤအကြောင်းမှာ ဗမာကိုရိုက်မယ့်အကြောင်းလေးကို
ကျုပ်တို့ခွဲထုတ်ကြဘို့လိုမယ်ထင်ပါတယ် ) ( အထင်ပါ )
ပို့စ်ရေးတဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ အဆိုအရ အဲ့သည်လူတန်းကို ဖြတ်ရင် ရဟန်ဖြစ်စေဦး
ရိုက်မှာဘဲဆိုတဲ့ အဆိုကိုထောက်ရှု့ခြင်းအားဖြင့် လူမျိုးရေးကို ဘေးချိတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဘေးကို တော်တော် ပိုးစိုးပက်စက် ချိတ်ထားပါတယ် ။
ကျေနပ်မှု အပြည့်နဲ့ ကို ချိတ်ထားပါတယ် ။
ကိုခိုင့် ကွန်မန့် ကို Choose asaBest Comment အဖြစ် ရွေးချယ်ထားတာကိုလည်း
သတိပြုပါဦး ဆြာရဲ့ ။
ဤဓလေ့များနှင့် ပြုမူလုပ်ထုံးများ ( ဝိုင်းရိုက်တာမပါ ) ဟာ တိုးရစ်ဇင်တွေတွက် ကြည့်ရှု့စရာတွေဖြစ်သမို့
ဆိုတော့ကာ ဆိုခဲ့ပြီးသလို ဤဒေသ၏ ပြင်ပလောကနှင့်ဆန့်ကျင်သော ဓလေ့စရိုက်များကို
ဥပမာ ထိုဒေသသို့ ရပ်ဝေးရပ်နီးဧည့်သည်များ ချဉ်းကပ်လာသောအခါ ဆောင်ရန်ေ၇ှာင်ရန်
ပြဿနာက ဒေသခံ တစ်ယောက်မှ ပေါ်မလာသေးတာက ဆင်းစားစရာဘဲ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဤအကြောင်းထဲမှာ လူမျိုးရေးကိစ္စကို ထည့်သွင်းပြောလိုက်လျှင် လိုအပ်သော
အပြစ်ပြောခြင်ထက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည်များကို သက်ဆိုင်သူတို့မည်သို့
နိုင်ငံတော်ဘာသာကိုပြဌာန်းကောင်းလို့ လို့ ပြောတော့ တော်တော်အတွေးကကြပ်သွားတယ်
နိုင်ငံတော်ဘာသာ. မြန်မာဘာသာ (အခြားဒီထက်နှံ့ နှံ့စပ်စပ်လူများများနားလည်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဘာသာ ဘာဘာသာရှိပါသလဲ ?)
နိုင်ငံတော်သာသနာ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ( ပြည်သူအများစုကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာ။ အကျိုးအကြောင်း အထောက်အထား နဲ့ ဘယ်လိုစမ်းစမ်း မေးမေး အဖြေမှန် ရှိနေတဲ့ သာသနာ )
တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားက ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကလက်ကျန် လက်နက်တွေ။ ဗီယက်နမ်စစ်ကလက်နက်တွေကိုငွေဖေါ်ချင်တဲ့ လက်နက် Brokerတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာပြီ စစ်ပွဲတွေဖန်တည်း ၂ဘက်လုံးကိုလက်နက်တွေဈေးကြီးကြီးနဲ့ေ၇ာင်း စစ်ပွဲတွေမပြတ်အောင် မရပ်နဲ့ဆွေးနွေးတာလက်မခံရဘူးစသည်။ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်လိုမှမရအောင်အမျိုးမျိုး ဖန်တည်းနေကြတာ။
ဒါတွေသဘောပေါက်လာတဲ့မျိုးချစ်တွေကလက်နက်စွန့် ပြီး ပြည်ပရောက်လာကြတာ။ လိုက်စုံစမ်းကြည့်ကြပါ။
နိုင်ငံတော်ဘာသာ သာသနာ မပြဌာန်းလည်း ချဖြစ်မှာပဲ။ စကတဲ ကိုက သာသနာခြားဖြစ်သွားကြတာ သာသနာပြုတွေ ကိုအားမပေး နာမည်ကြီးတွေကိုပဲအားပေး။ နတ်ပဲသိတဲ့ သူတွေက သာသနာတခု ချပြလိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းလက်ခံသွားကြ။ အကြွေး အပေးအကမ်းကလဲကောင်းတော့ပါသွားတာပေါ့။
တဘက်ကိုလဲ ကြည့်ဦး နိုင်ငံတခုမှာ နိုင်ငံတော် ဘာသာ ။ သာသနာ အခြေခံဥပဒေ မရှိရဘူးလား။ အာရပ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်မည်လဲ။ မြန်မာပြည်ကမှ မပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီလေးပုံစံလေးရှိသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ က မေးမြန်းစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိ သလို အဖြေတွေကလဲ အဆင်သင့် ။ သွားမေးကြည့်ပါလား အခြားသာသနာကြီးတွေကို။ အဓိကပြဿနာက မြန်မာပြည်ကို ထင်သလိုချယ်လှယ်လို့ မရသူတွေက လိုက်ဖျက်ဆီးနေတာပဲ။ ကမ္ဘာ့ဝါဒသမားတွေကလာလိုက်။ စီးပွားရေးသမားတွေကလာလိုက်။ ဘာသာရေးသမားတွေကလာလိုက်နဲ့ ။ အဆိုးဆုံးကဘာသာရေး ဘန်းပြ လက်နက်ရောင်းသမားတွေပဲ ။ ရခိုင်မှာလဲဒါပဲ။ ရခိုင်နာမည်ခံ ဘင်ဂလီတွေက ရခိုင်တွေ ဗမာကိုမမုန်းမုန်းအောင် အကြောင်းတွေဖာန်တည်း။ဗမာတွေလာနေလို့ မရတော့သူတို့ ကစိမ့်ဝင်။ ဗမာတွေကျတော့ သူတို့ သိပ်လိမ်လို့ မရ( ဒါတောင်၇န်ကုန်ကဗမာမတွေ နိ်ုင်ငံခြားသားမှအထင်ကြီးသူမတွေ ကောင်းကောင်း ခံနေကြရတာပဲ။)
ပညာနဲကြတာ။ ဗဟုသုတနဲကြတာ။ အတွေးအခ်ါနဲကြတာ။ကိုယ့်အားကို ကိုးလိုချင်စိတ်နဲ ကြတာတွေက တရားခံပဲ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက မဆလ ရဲ့ စကားလုံးတွေယူမသုံးပါနဲ့ ။ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာချက်တွေနဲ့ မှန်မှ တွေးတွေးခေါ်ခေါ်ရေးကြပါလို့ ပဲ။ ဒို့ မြန်မာသစ္စာ ဘုရားမပါစေ။နိုင်ငံတော်ကြီး အမြန်အေးချမ်းသာယာပါစေ။
ကိုနိဂိမိအခုလိုရိုက်ခံရတာအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…
ဒီဖြစ်ရပ်အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူး ရဲဘော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပိုစ်ကြောင့် ကိုယ် နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိ၊ အသိမိတ်ဆွေမရှိတဲ့ဒေသတွေကို သွားတော့မယ် ဆိုရင် အဲဒီဒေသရဲ့ အစွဲ၊အယူဝါဒ၊ ထုံးတမ်း အဆင်လာတွေကိုသေသေချာချာ လေ့လာမှတ်သား မေးမြန်းပြီးမှ သွားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေး တစ်ခုတော့ ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ဗျ..။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အခုအသက်အရွယ်အထိ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံဖူး၊ကြားဖူးဖို့ ဝေးစွ၊ စာတွေဘာတွေထဲမှာ တောင် လုံးဝ မဖတ်ဖူးသေးလို့ အရမ်းကို အံသြရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် အယူဝါဒ လွဲမှားမှုမျိုးကို အဆိုပါ ဒေသရဲ့ သာသနာပိုင် များအနေဖြင့်လည်း တတ်နိုင်သလောက် အယူဝါဒ မှန်။လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို ရောက်အောင်လို့ ပြောဆိုဆုံးမ တရားပြသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် နာမည်ကြီး ဆရာတော်တစ်ပါးပါး ဖြစ် အဲဒီဒေသကို အရောက်သွားပြီး တရား၊ဓမ္မ များကို ဟောကြား အသိပညာပေးစေလိုတယ်ဗျာ။
ကိုယ်တို့ မတွေ့ကြတာ တော်တော် ကြာနေပြီနော်…။
ညီလေး အတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာ တစ်ခု ရလိုက်ပါတယ်။
အားလုံး ခံနေကြရတာလို့ပဲ ၀င်ပွားခဲ့ပါရစေ…။
သတိလေးနဲ့ နေပါ စားပါ သွားပါ လာပါ။
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဆက်သွယ်ပါဦး ဗျာ။
ဟိုးဘုရင်လက်ထက်ကသမိုင်းကြောင်းကြောင့် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုလည်း ဒီအချိန်မှာ ဗမာပြည်ဆို
တာတစ်ခုထဲဖြစ်သွားပြီလေ… ဒါတွေပြည်ဖုံးကားချသင့်ပါပြီ။ သမိုင်းမှာ ဘုရင်တွေကသတ်ဖြတ်မသိမ်းပိုက်ခဲ့
လည်း တိုင်းတစ်ပါးကလာသိမ်းမှာပဲ… ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း နားလည်မှုယူသင့်နေပြီ… “ဗမာဆို
အကုန်ရိုက်” ဆိုတာတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး …. ဒီအယူအဆတွေ/သွေးကွဲနေမှုတွေက တိုင်းပြည်
ဆုတ်ယုတ်စေမယ့်ကိစ္စတွေပါပဲ …. တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဖြစ်စေမယ့် ဥပဒေတွေပြဌာန်းဖို့ လိုပြီး
လွှတ်တော်ထဲထိ ဆွေးနွေးကြရမယ့် ကိစ္စတွေများ ဖြစ်လာမလားမသိဘူးနော်… စာရေးသူအရိုက်ခံရလို့
စကားမစပ် … ဖောင်းဖောင်း မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နောက်နှစ် ငပလီကို သင်္ကြန်တွင်း2ယောက်တည်း ဟန်းနီး
မွန်းထွက်တော့ ငပလီရွာရော/သံတွဲရော ရခိုင်တွေ သဘောကောင်းသလိုပါပဲ ။ သင်္ကြန်တတွင်းလုံးပဲ နေခဲ့
တာ။ အခုလိုသိရတော့ တွေးတောင်ကြောက်မိတယ်။ အဲတုန်းက အဲလို“ဗမာဆိုရိုက်ဆို … သေပြီဆရာပဲ”
၀န်းကျင်တိုင်းမှာ ဒီလိုအယူသီးမှု့တွေပေါ်မူတည်ပီး လူသတ်မှု့အထိ ယနေ့ထိဖြစ်နေဆဲပါ..
ဒီလိုရှေးထုံးစဉ်လာဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယ်မရှိတဲ့ အယူသီးမှု့တွေကို ကိုယ်တိုင်ကစလို့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ
ကာယကံရှင် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က ဒီ ကိစ္စကို လူမျိုးရေးလို့မတွေးခဲ့ပါ ။
သို့ သော် ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး ရဲ့ခုတုံး သားကောင် အဖြစ်မခံနိုင်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ် ။
ဘာသာရေးမှ အစပြုပြီး ပြသာနာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် လူမျိုးရေးဆိုတာက နောက်ဆက်တွဲ ပါလာတတ်တာကြောင့်
ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေဟာ အရမ်း သတိထားရပါမယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်ကာလ က အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ တချို့ တချို့ သော
လူမျိုးစုတွေ အထဲက တချို့ တချို့ သော အစွန်းရောက် တွေကြောင့် အမှိုက်က စ ပြသာဒ် မီးလောင် ခဲ့ပြီးပါပြီ ။
အမှန်တော့ အစွန်းရောက်တွေကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ အသုံးချနိုင်တဲ့ ညဏ်ရည်မြင့်သူ တချို့ ကြောင့်ပါ ။
ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု အဆင့်အတန်းက ပိုမြင့်လာတဲ့ အနေအထားမှာ
အစွန်းရောက် စိတ်တွေကို စနစ်တကျ ရိုက်သွင်းနေကြမယ်ဆိုရင် အလွန်ကို အားပြင်းတဲ့ ပိုမိုခိုင်မာ တောင့်တင်းတဲ့
အစွန်းရောက်တွေ ပေါ်ထွက် လာပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော် ကြုံတွေ့ ရသလိုမျိုး ထပ်တူထပ်မျှတော့ ဘယ်သူမှ မကြုံတွေ့ 
နိုင်ပါဘူး ။ မတူညီတဲ့ ပြသာနာမျိုးမှာ မတူညီတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲရဲ့အရှုံးထဲကနေ
အများအတွက် အမြတ်ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ ပဲ လိုအပ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ပိုစ့် ခေါင်းစဉ်ဟာ ” မျက်ကန်း” ပါ ။
အားလုံးသော မျုက်ကန်းများ အတွက်ပါ ။ အားလုံးသော ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် မျက်ကန်းတွေ အတွက်ပါ ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မျက်ကန်းဖြစ်နေရင် ကျွန်တော် မြင်ရအောင် ကုပါမယ် ။ ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်
ပါတ်သပ် နေသူတွေ မြင်ရအောင် ကြိုးစားပါမယ် ။ မျက်ကန်း ဘ၀က လွတ်အောင် ကြိုးစားရင်းနဲ့ ပဲ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ 
သေပြီး နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေ မျက်စိ အကောင်းပတိဖြစ်နေကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ……….။
nigimi ရေ ကျွန်တော်ဖတ်တာနားမရှင်းလို့ ဖြတ်ဆိုတာဘာကိုဖြတ်တာလည်းဟင် တန်းစီထားတဲ့ လူတန်းကိုဖြတ်တာလား။နားမလည်လို့ပါနော်…ဓါတ်ပုံလေးပါ ပါရင်တော့ပိုကောင်းမယ်။
ရှင်လောင်းလှည့်တာ မြင်ဖူးပါသလား ။
မြင်ဖူးတယ် ဆိုရင် ရှင်လောင်းတွေကို ဖယ်ပြီး သာမာန် အရပ်သူအရပ်သား ရွာပေါင်း ၁၇ ရွာကို
မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ ၂ ယောက် ၁ တွဲ မဟုတ်ပဲ ၁ ယောက်စီ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆွမ်းချိုင့်တွေ ရွက်
နံဘေးမှာ ကာလသားတွေ ကျေးရွာ လူကြီးတွေက ခပ်ကျဲကျဲ ခြံရံပြီး ကန့် ကော်တော ဘုရားဝင်းထဲ ကို တရွှေ့ ရွှေ့ဝင်ရောက်နေတဲ့
မြင်ကွင်းပါ။ သိပ် ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
အဲသည် လူတန်းကြီး ရဲ့ညာဖက် အခြမ်းမှာ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်က ဘယ်ဖက် အခြမ်းကို ကျွန်တော့် အရှေ့ မှာ ရှိနေတဲ့
အမျိုးသမီးကို ခွင့်တောင်းပြီး ဖြတ်ကူးလိုက်မိချိန်မှာပဲ ………………..။
ကြုံရင် လာပြီး ကြည့်လှည့်ပါ ။ သိပ်ရှားပါးတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးပါ ။ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်း မတင်နိုင်လိုက်မိပါဘူး ။
အဲ…. ကျွန်တော့်ကို နမူနာ ယူပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် လုပ်ဖို့ တော့ လိုမယ် ။
နီးစပ်ရာ ခရီးသွား လမ်းညွန်တွေမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ ထည့်ဖို့တိုက်တွန်းပေါ့ဗျာ ။
အင်းသဘောပေါက်ပြီ…နောက်ဆိုသတိထားမှ…ရန်ကုန်မှာတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားတို့ဘာတို့ဆို ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုခွင့် တောင်းပြီးဖြတ်နေကျဘဲ။သူတို့ဓလေ့ ကိုသိထားရတာပေါ့။
နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ယောက်က ဖြတ်ရင်ကော လုပ်မှာလားဆိုတာ သိချင်သား ..
မြန်မာ ရုပ် မပေါက်တဲ့ ဂျပန်တို့ ဥရောပသားတို့ပေါ့နော်..
ဦးဖော ရဲ့(ဟဲဟဲ ၊ ဟဲဟဲ) ကို ခဏ ငှားသုံးပါမယ် ။
ဟဲဟဲ….ဟဲဟဲ…..(ကျွန်တော်က ထပ်ဖြည့်ပါမယ်….) အဟွတ်…အဟွတ်….
ဓါတ်ပုံ ရပါပြီ ။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က Phone နဲ့ရိုက်ထားတာပါ ။
ကျွန်တော့်ကို ရိုက်နေကြတာကို ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတန်း ကိုပါ ။ မနက်ဖြန် မနက်ကို တင်ပေးပါမယ် ။
ကျွန်တော်လည်းရွာတွေသွားရင် မကြာခဏ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်ရလို.
ကိုယ်ချင်းစာတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော. အပိုင်း(၁)မှာကတည်းကလူမျိုးရေးလို.မမြင်ဘူး။
ဘာလို.လည်းဆိုတော.နေရာတကာ (အထူးသဖြင်.) ဝေးလံသီခေါင်တဲ.နေရာ ၊ ရွာတွေမှာ
ပြင်းထန်တဲ.အယူသည်းမှုတွေရှိနေသေးတယ် ။ ဒီဖြစ်ရပ်လောက်တော.မဆိုးဘူးပေါ.ဗျာ ။
ကျွန်တော်လည်းတခါက ခေါင်းမှာဘုထ ဘူးသေးတယ် …..ငယ်စဉ်ကပါ ။ မိတ်ဆွေတယောက်
ထမ်းပြီး သချိုင်္င်းပို.သဗျ ။ ကျွန်တော်ကဘုမသိဘမသိ ၀င်ပြီးထမ်းပေးတာသင်္ချိုင်းလဲရောက်ရော
” နောက်လာဦးမလား” လို.အော်ကြပြီး ခဲတွေနဲ.ပစ်တာ ကျွန်တော.ခေါင်းတန်းထိတာဘဲ ။
ပြောရရင်အများကြီးဘဲဗျို. ၊ ခုနောက်ပိုင်းလဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ.တောရွာတွေသွားရရင် အတော်
အခု ပြဿနာကတော.ဗျာ …ဒီလောက်ဆိုးတဲ.အယူသည်းမှုကို အစိုးရအဆက်ဆက်ကဘာ
လို.ကြည်.နေကြတာလဲ ။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဓလေ.ထုံးစံသာပြင်ရခက်တာပါ ၊ ဒီလို အရပ်
ဓလေ. ကိုတော.အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအခွင်.အာဏာနဲ.တားဆီးလို.ရတာဘဲဗျ ။ ကျွန်တော်
ကတော.ဒီလိုအယူသည်းမှုကို ဘာသာရေးဓလေ.လို.လဲမမြင်ဘူး ၊ လူမျိုးရေးဓလေ.လို.လဲ
မမြင်ဘူး ၊ သူ.ရွာ သူ.အရပ်ဓလေ.လို.ဘဲမြင်တယ် ။ပြင်လို.ရပါတယ်ဗျာ …..အစိုးရဘက်က
ဒီလိုမဆီလျော်တဲ.ဟာတွေသိရင်ပြင်ရမှာ ။ ကျွန်တော်သွားလေရာရွာတွေမှာလဲ သူ.ဟာနဲ.သူ
ခတ်ဆိုးဆိုးဓလေ.လေးတွေရှိကြတာဘဲ ။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ခင်ဗျားခံခဲ.ရတာနဲ.ရင်းပြီး
ဓလေ.ဆိုးတွေပြင်နိုင်ရင်တော. အလွန်ကောင်းတာပေါ.ဗျာ ။ ကျွန်တော်လွဲခဲ.ရတာက
ရယ်စရာတွေဖြစ်ခဲ.ပြီး ၊ ခင်ဗျားအလွဲကသေနိုင်တာဆိုတော. …………။
(ဖတ်မိခါစကတော.တော်တော်ခံပြင်းတယ် ၊ နောက်တော.သဘောပေါက်ပြီး သက်ဆိုင်သူ
အဲ့လိုအလွဲမျိုး ဆိုရင်တော့ ကျနော်မွန်ပြည်နယ်သင်္ကြန်မှာ
ပြန်ပြောချင်စရာမကောင်းလောက်အောင် အကြီးကြီးလွဲခဲ့ဖူးပါတယ်… အဲ့ဒီလူတွေကိုတော်တော်စိတ်ပျက်သွားမိတယ်။